Iindaba -Imigangatho yokukhutshelwa kwamayeza amaTshayina
Uninzi lwezicatshulwa zamayeza esiTshayina ikakhulu zithunyelwa kumazwe angaphandle. Oku kunokuhambelana nento yokuba kusekho umahluko omkhulu kwiimbono zamayeza amaTshayina kwizicatshulwa zamayeza amaTshayina. Abantu abaninzi bacinga ukuba amayeza amayeza amaTshayina ahluke kakhulu kumaqhekeza amayeza esiTshayina. Iyeza lonyango lesiTshayina, kuba zininzi iindlela ezifihlakeleyo zokuphendula ngamachiza xa kusenziwa amayeza esiNtu. Esi sisiphumo esingenakufezekiswa xa isicatshulwa samayeza esiTshayina sixutywe. Ngapha koko, uphando lwenkampani yaseGuangdong Yifang malunga negranules yamayeza esiTshayina ibonakalisile ukuba izicatshulwa zamayeza amaTshayina zinokugcina uninzi lweempawu zamayeza amaTshayina. Kwangelo xesha, ngenkqubela phambili yetekhnoloji, izithako ezisebenzayo zamayeza amaTshayina ziye zacaca. Umgangatho wamayeza amaTshayina kwi-Chinese Pharmacopoeia yenzelwe ukubhekisa, kufuneka sikwazi ukuqulunqa ngokukhawuleza imigangatho yokuqala yamachiza amayeza amaTshayina ahlangabezana neempawu zamayeza amaTshayina kwaye zamkelwe lihlabathi, kwaye siqhubeke ukuphucula inkqubo yokuphunyezwa. Oku kuyahambelana nomthetho wangoku wophuhliso lwezityalo.
Ukubeka emgangathweni kunye nokuphuculwa kwezicatshulwa zamayeza amaTshayina kushiyeka ngasemva. Ngokumiliselwa kunye nokuqhubela phambili okuqhubekekayo kwesicwangciso sokuphuculwa komgangatho wamachiza elizwe lam, inkqubo yesiqhelo yesizwe yamachiza sele imiselwe, isantya sokwakhiwa kolwazi lokulawulwa kweziyobisi sikhawulezile, kwaye umsebenzi wolawulo lomgangatho wamachiza uye wabekwa emgangathweni ngakumbi kwaye waphuculwa. Nangona kunjalo, ukubekwa emgangathweni kokukhutshwa kwamayeza esiTshayina kusalele ngasemva, ikakhulu kwezi zinto zilandelayo:
Umgangatho awusekwanga. Amachiza amayeza amaTshayina abalulekile kwimveliso yamachiza patent yaseTshayina. Ngokwezibalo, malunga ne-29.8% yamayeza e-patent yase-China asebenzisa amayeza ama-Chinese, kodwa kusekho ezinye izicatshulwa zamayeza zase-China ezingeka kuseki imigangatho yesizwe. Ngenxa yokunqongophala kwemigangatho esemthethweni, imigangatho esecaleni yemfuno kunye nemigangatho yamashishini yamkelwe ikakhulu kwimveliso nakwimisebenzi yeshishini, kwaye amagatya asemgangathweni kwisivumelwano asetyenziswa njengesiseko sokuhanjiswa kwemveliso, kwaye iindlela zokuhlola umgangatho wemveliso ziyabhidisa.
Umgangatho awufezekanga. Izinto ezigqityiweyo ezisemgangathweni zisisiseko solawulo olusebenzayo lomgangatho wezicatshulwa zamayeza aseTshayina. Nangona kunjalo, ngenxa yokwazisa ixesha elide kwemigangatho yezinye iziyobisi zaseTshayina, izinto ezisemgangathweni azifezekanga. Umzekelo, amanye amayeza amadala esiqhelo amaTshayina akhupha imilinganiselo yokusilela kwentsalela yokubulala izitshabalalisi kunye nezinto ezinzima zokumiselwa kwesinyithi, ezinye azinayo imigangatho yovavanyo lwezinto ezincedisayo, kwaye ezinye zisilela ukujonga umda wentsholongwane.
③ Izitenxo kwimigangatho. Kukho imigangatho emininzi yokukhutshwa kwamayeza amaTshayina, kwaye kukho izitenxo ekunikeni igama, iindlela zokulungiselela, iipropathi kunye nohlolo. Umzekelo, ezinye izicatshulwa zamayeza esiTshayina zinegama elifanayo kodwa iindlela ezahlukeneyo zokulungiselela. Ukuthatha isicatshulwa seScutellaria baicalensis Georgi njengomzekelo, kubonakala amaxesha ali-12 kuhlelo lowama-2010 lweTshayina Pharmacopoeia nakwi "Prescriptions of Traditional Chinese Medicine". , "Ixabiso lokugqibela le-pH ngaphambi kokuma", "Isisombululo sokuhlamba imveliso ekrwada" kunye nezinye iinkqubo eziphambili zenkqubo ezichaphazela umgangatho weemveliso ezigqityiweyo zahluke kakhulu, ekulula ukubangela ukudideka kwimveliso kunye nokusetyenziswa.
Umgangatho omgangatho awulingani. Inqanaba eliqhelekileyo lezicatshulwa zamayeza esiTshayina ezivunyiweyo ngohlobo lwamachiza amatsha kwaye zibandakanyiwe kwi-Chinese Pharmacopoeia ziphezulu kakhulu. Nangona kunjalo, ezinye izicatshulwa zamayeza emveli zaseTshayina ziseneengxaki ezinje ngetekhnoloji engonelanga kunye nokusilela kwetekhnoloji ephambili. Ukongeza, uninzi lwabavelisi bokukhupha amayeza amaTshayina ngamashishini amancinci anenqanaba lobuchwephesha eliphantsi kunye namandla emveliso. Kunqabile ukuba bandise kwaye baphande ngenkqubo yemveliso ngokungathí sina, kunye nokusilela kuphuhliso olunzulu lwemveliso, okukhokelela kumgangatho ophantsi wobuchwephesha kwimveliso yetekhnoloji yamayeza amaTshayina. Ukhuphiswano lwentengiso oluphantsi nolungalunganga.
Umgangatho awususwa. Ngenxa yokunqongophala kweendlela zokuvavanya ukuphunyezwa kwemigangatho yamayeza amaTshayina, amanye amayeza amaTshayina akhupha imigangatho "aphile kodwa angafi", ukuze eminye imigangatho engakhange ihlaziywe okanye ihlaziywe iminyaka emininzi isasetyenziswa, kwaye imfuno engxamisekileyo yokuseka indlela yokuphelisa esemgangathweni